कोषको प्रयोग के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki धन को प्रयोग
धन को प्रयोग
कोष को उपयोग द्वारा के मतलब छ?
यदि तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ भने, तपाईंले यसलाई बैंकबाट उधार लिनु पर्छ। तर अब यो यो छ कि तपाई सधैँ यो पैसा प्रयोग गर्नु पर्छ। पहिले नै अग्रिममा तपाईंले पैसाको लागि पैसा आवश्यक छ भनेर निर्दिष्ट गर्नु पर्छ। यदि तपाईं नयाँ भान्सा वा नयाँ कार किन्न चाहनुहुन्छ भने, यो हो धन को प्रयोग आवश्यक। किनकि सबै कुरा सूचीबद्ध हुनुपर्छ, जसको लागि यो पैसा प्रयोग गरिन्छ। आज, धन प्रयोग को लागी धेरै कारणहरू छन्। त्यसैले यो हुन सक्छ कि कसैले आफ्नै आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छ।
त्यसपछि उसले धन को लागी आवेदन गर्न सक्छ, जसको केहि पुन: प्राप्य छैन। तर यदि तपाईं कोषलाई सही तरिका प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मात्र यो मामला हो। धन को प्रयोग एक लक्ष्य सेट र यसलाई प्राप्त गर्न को लागी मुद्रा को उपयोग को बारे मा छ। यस प्रयोग को लागी निर्दिष्ट गरिएको छ। यसको अर्थ तपाईं अन्य कुरामा पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न। निश्चित समयको अन्त्यमा, तपाइँले त्यसका लागि कोष प्रयोग गरेको के हो भनेर निर्दिष्ट गर्नु पर्छ। एक ऋण वा प्रचारक प्रयोगकर्ताको प्रयोगकर्ताले सधैं कोष को प्रयोग गर्न सावधान रहनु पर्छ। यसबाहेक, धनको प्रयोग निश्चित समयमा समयसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले तपाइँले आवेदन गर्नु भन्दा राम्रोसँग सोच्नु पर्छ, यदि तपाइँ पछि पछि सबै कुरा सही साबित गर्न सक्नुहुन्छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँ केहि निश्चित वस्तुहरू र सम्पत्तिहरूमा पैसा र सीमित रकम खर्च गर्न अनुमति दिइन्छ। धेरै लागू गर्न को लागी धन को प्रयोग सजिलो छैन। जो कोही कार्यालयमा स्व-नियोजित हुन्छ जो सुरु-सुरु रकमको लागि आवेदन गर्नुपर्छ। यदि तपाईंले घर किन्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई ऋण चाहिन्छ र पनि घर बनाउने चाहना पनि ऋण चाहिन्छ। तथ्य यो हो कि बैंकले यसबाट उधारोकर्ताको रूपमा यो प्रयोग को अनुरोध गर्न सक्छ र यदि तपाईंले उद्देश्य राख्नु भएको उद्देश्यको लागि रकम प्रयोग गर्नुभएन भने तपाईले प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दछ। तपाईले सबै सुरक्षित र सुरक्षित राखेर एक फोल्डर सिर्जना गर्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई राम्रो तरिकाले कोष प्रमाणित गर्न सजिलो बनाउनेछ। तपाईंसँग एकै हातमा सबै चीज छ र चाँडै पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले शून्य सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्दैन।
किनभने यो सामान्यतया अराजकताको अर्थ हो। सबै महत्त्वपूर्ण बिलहरू क्रमबद्ध गर्नुहोस् र पछि तपाइँ पनि रकम सँगै सँगै राख्न सक्नुहुन्छ। प्रायः एक नियुक्ति बैंकसँग व्यवस्थित गरिएको छ। बैंक सल्लाहकारले पनि धन को प्रयोग को संकेत दिनेछ। तपाईं निश्चित रूप देखि यसलाई छडी र पछि पछि तपाईं स्पष्ट अन्तस्करण संग बैंक फिर्ता जान सक्छ र सल्लाहकार संग एक साथ कोष को उपयोग मा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईंलाई बताउनुहुन्छ कि सबै कुरा ठीक छ र यदि तपाईंसँग साबित गर्न चाहनुहुन्छ भने। सबै कुरा आज सम्भव छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि चाँडै ऋण प्राप्त गर्न सजिलो छ। तर धनको प्रयोग पनि यसको भाग हो। यसकारण, तपाईंले बिर्सनु हुँदैन कि यो ऋणको आवश्यकता हुँदा यो प्रयोग एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। तपाईंले तथ्यलाई कम गर्नु हुँदैन कि यसमा केही प्राधिकरणहरू ठीकसँग हिसाब गर्न समावेश गर्दछ। यद्यपि धेरै वर्षहरु भन्दा धेरै चीजहरू आज अझ सजिलो र छिटो छ, तपाईं अझै पनि समावेश हुनुपर्दछ। तपाईं कोष को मालिकहरु देखि कुनै पनि रहस्य छैन। किनकि यसले तपाईंलाई समस्याको कारण हुन सक्छ। सधैं ईमानदार हुनुहोस् र सबै बिलहरू एकत्र गर्न को लागी कर्जा को लागी प्रयोग गरिएको छ र तपाईं सबै केहि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईंले देख्नुहुनेछ, यो निश्चित रूपमा एक राम्रो ऋण संग काम गर्नेछ।
अघिल्लो लेखन्यूनतम राजधानी आवश्यकता
अर्को लेखसम्पत्ति क्रेडिट